N-GUN JA WA: အိမ်မက်ဆိုးမှာ…. နှစ်ရက်တာ - နန်းလွင်
အိမ်မက်ဆိုးမှာ…. နှစ်ရက်တာ - နန်းလွင်
အဆိုပါ တပ်ရင်းမှူးကို ဖာသာခါးလီက ဖမ်းဆီးထားတဲ့ရွာသားတွေရှိရင်ပြန် လွတ်ပေးဖို့တောင်း ပန်ခြင်ကြောင်း နန့်လင်းပါကဒုက္ခသည်တွေဆီဆန်ပို့ ခြင်ကြောင်းတောင်း ဆိုတော့ သူကသွားပါ သွားပါလို့ ပြောပါတယ်။
ကျမတို့ ကိုလည်း ဓာတ်ပုံမရိုက်ဖို့သူကလှမ်းပြောပါတယ်။
အိမ်ရှေ့မှာ သူတို့ကတုတ်ကျင်းတွေ တူးထားတာတွေ့တာကို ကျမတို့ကပြောတော့သူက ဒါကစစ်ရေး အရလုပ်ရတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။
အဆိုပါတပ်ရင်းမှူးကို ရွာသူအချို့က သူတို့လက်ဝတ်ရတနာတွေ တောင်းယူ တယ်လို့ကျမတို့ ကိုဒုက္ခစခန်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျမတို့လည်းသူ့ကို သေချာသတိထားပြီးကြည့်မိပါတယ်။
သူလက်မှာဝတ်ထားတဲ့မိန်းမလက်စွပ်ကိုမြင်တော့ကျမတို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လက်တို့ ပြီး သတိပေးဖြစ်ပါတယ်။ ရွာသူရွာသားတွေပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင် သူ့ ဆီကယူ ထားတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာ ကိုဝတ်ထားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စကို ကျမမသေချာပါ။ ဒါပေမယ့်ရှေ့တန်းမှာ စစ်တိုက်နေ တဲ့တပ်ရင်းမှူးတစ်ယောက်က မိန်းမလက်စွပ် ကိုမတော်မနှမ်းဝတ်ထားတာကိုတော့ ကျမတို့အားလုံး တွေ့နေရပါတယ်။
အဲဒီနောက်ကျမတို့ကိုရှေ့ဆက်သွားပါလို့ ခွင့်ပြု တာကြောင့် ကျမတို့ခရီးဆက်ဖို့ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
တဖြေးဖြေးနဲ့မုန်းဒိန်ပါက ထွက်ခါနီးမှာဖာသာ ခါးလီက တောထဲမှာပုန်းနေတဲ့သူတွေရှိနိုင်သေးတယ်။ ငါတို့ရှာကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးကားကိုရပ်ကာ ကချင် စကားနဲ့လိုက်အော်ပါတယ်။ တော်တော်ကြာတော့ တော ထဲက အမျိူးသမီး လေးယောက်ထွက်လာပါတယ်။ တစ်ယောက်က ကချင် ဖာသာမှန်းသိတာနဲ့ ချုံးပွဲ ချငိုတော့ပါတယ်။
အဘွား အိုတစ်ဦးကသူမပြေးနိုင်လို့ တောထဲမှာ နေနေကြောင်း၊ သူ့သားကိုလည်ပင်းကိုကြိူးချည်ပြီး ရိုက် ထားတာကြောင့်တောထဲမှာ ဆေးကုပြီးထားထားကြောင်းပြောပြ ပါတယ်။
သူတို့ကိုကယ်တင်ပါ။ လယ်တွေက လည်းရိတ်သိမ်းချိန် ဖြစ်လို့ ဒီအတိုင်းသာ မရိတ်သိမ်းနိုင်ရင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးမန်စီမြို့နယ်ထဲကရွာဆယ်ရွာနီးပါး စားစရာမရှိ ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြပါတယ်။
ကျမတို့စကားပြောနေရင်းအနောက် ဘက်မှာ အုန်းကနဲ အသံကျယ်ကြီးကြားရပါတယ်။
ကျမက လိုင်ဇာမှာ အဲဒီအသံကို အကြိမ်ကြိမ် ကြားဖူးနေတာကြောင့်လက်နက်ကြီးသံ လို့ သတိထားမိပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ၇ွာထဲမှာ နေတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးဟာတပ်ရင်းမှူးဦးဆောင်ပြီး တန်းစီပြီး အမြန်လျောက်လာကြပါတယ်။
ကျမတို့နားကနေ ကချင်ငွေဓားတွေ ကချင်လွယ်အိတ်တွေ၊ ဆိုလာပြားတွေဒယ်အိုးတွေ ကချင်ပုဆိုးတွေ ခေါက်တွေကို သယ်ပိုးထားသော အစိုးရ စစ်သားများတစ်ဦးချင်းခပ်မြန်မြန်လျောက်နေကြပါတယ်။
ကျမညီမလေးကတွေ့လားမမ သူတို့သယ်သွားတာတွေက ၇ွာသားတွေပစ္စည်းတွေ သူတို့မှာ ကချင်ဓားတွေ ကချင် ပုဆိုးတွေရှေ့တန်းမှာဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာလဲလို့ကျိတ်ပြောပါတယ်။
တပ်ရင်းမှူးကို ကိုအောင်စိုးလင်းကလှမ်းမေးတော့ဟိုမှာ တိုက်နေတယ်။ ကျတော်တို့သွားကူရမယ် လို့ သူကပြန်တုန့်ပြန်သည်။ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ကားသွားမှာလားသွားလေ။ ကျတော်တို့နောက်က လျောက်မယ်လို့ပြောသည်။
ဖာသာက ကျမတို့ဘက်လှည့်ပြီးသေရင် ငါတို့အရင်သေဆိုပြီး ရှေ့ကသွားခိုင်းနေတယ်။ မသွားဘူး လို့ပြောကာ ကျမတို့ ကားကိုဒီအတိုင်းရပ်ပြီးကျမတို့လည်း လမ်းဘေးမှာဒီအတိုင်းရပ်နေလိုက်ကြပါတယ်။
ဖာသာတွေတိုင်ပင်ပြီးဒီမှာနေကြမယ်လို့ဆိုတာ ကျမတို့ဘုရားကျောင်းရှာကြ ပါတယ်။ကျမတို့ရှေ့ကိုသွားလို့မရသလိုနောက်ကိုပြန်ဆုတ်လို့မရ။ ရှေ့မှာလည်း လက်နက်ကြီးသံတွေကဆက်တိုက်ကြားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျမတို့နဲ့သိပ်မဝေးတဲ့နေရာမှာဘုရားကျောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ပါတယ်။ ကျမတို့လည်းဘုရားကျောင်းဘေးက အိမ်ကို မှောင်ထဲမဲထဲ ၀င်ကာမီးထွန်းဖို့ရှာကြပါတယ်။ ကံကောင်းစွာပင်အဲဒီအိမ်မှာဆိုလာပြား ကျန်နေသေးကာ ကျမတို့မီးထွန်းလို့ရသွားပါတယ်။
ကျမတို့မိန်းကလေးသုံးယောက်ကအတွင်းခန်းထဲမှာနေဖို့ ဖာသာက ပြောပါတယ်။
ကျမတို့နဲ့အတူ ဒုက္ခသည်၁၀ယောက်ကျော် ပါလာပါသေးတယ်။ သူတို့က မီးတွေဖိုကာ ကျမက ဘုရားကျောင်းက ပန်းကန်တွေကိုဆေးကာသူတို့အတွက် ညစာကိုပြင်ဆင်ကြပါတယ်။
ကျမတို့လည်းမှောင်ထဲမဲတဲ့ပါလာတဲ့ ခေါက်ဆွဲထုတ်တွေကို ဖောက်ကာ ရေနွေးထဲ ပစ်ထည့်ပြီး ချက်ကြပါတယ်။ ချက်ပြီးတော့ကျမက ပန်းကန်တွေထဲက တစ်ဇွန်းချင်းစီမျှပြီးထည့်ပေးပါတယ်။ ပါလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကတော့ အားလုံးစားနိုင်ပေမယ့်ကျမတို့ကတော့ ပင်ပန်းပြီးမစားနိုင်တော့။ဘုရားကျောင်းမှာရှိတဲ့ ခွေးတွေ လည်း ပိုင်ရှင်တွေမရှိတော့ အစား အသောက်စားရဟန်မတူပါ။ ကျမတို့နားလာပြီး မျှော်နေတာကြောင့်ခွေးတွေကို လည်းခေါက်ဆွဲတွေပန်းကန်နဲ့ထည့်ပြီးအစာကျွေး ဖြစ်ပါတယ်။
ညက တဖြေးဖြေးနက်လာပြီးဖာသာက မိန်းကလေးတွေ အပြင်သွားရင်သတိထားဖို့ပြောပါတယ်။
ကျမတို့မိန်းကလေးသုံးယောက်လည်းအောက်ကို မဆင်းရဲ။ ဒုက္ခသည်တွေက ယောက်ကျားဆယ်ယောက်ကျော်က ကျမတို့ကို မကြောက်ဖို့၊ အိပ်ဖို့ကျမတို့ကို သူတို့ကင်းစောင့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အားပေးကြပါတယ်။
ညသန်းခေါင်လောက်မှာခွေးတွေ က စူးစူးဝါးဝါးဟောင်ကြပါတယ်။ကျမတို့ အဖွဲ့ မှောင်မဲထဲ ဘုရားကျောင်းထဲ ၀င်လာတော့ခွေးကမဟောင်ပဲလာတောင် ခြေထောက်ကို လာနမ်းနေခဲ့သေးပါတယ်။
နောက် စစ်ဖိနပ်သံများလမ်းလျောက်သံများကြားရပြီး ကျမ စိုးရိမ်သည်မှာကျမတို့ကို တစ်ခုခုလုပ်လိုက်မှာ လက်စဖျောက်လိုက်မှာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမညီမလေးကကျမအကျီင်္ကို တဖက် သူ့ကင်မရာကို တဖက် ကိုင်ကာ မအိပ်ရဲဖြစ်နေရှာပါတယ်။
ကျမတို့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွားတိုင်းအစိုးရစစ်တပ်က မိန်းမပျိူများကို အနိုင်ကျင့်သည်။ သူများကို မတရားသတ်ဖြတ်သည် အနိုင်ကျင့်သည်ဆိုသော အကြောင်းအရာများစွာကို ဒုက္ခသည်များကပြန်လည် ပြော ပြလေ့ရှိပါတယ်။
အငယ်မလေးကသမီးအကုန်ရိုက်ထားတယ်။ သူတို့ စစ်ဝတ်စုံ ကိုအပြည့် မ၀တ်တာရော။ ရွာသားတွေ အိမ်မှာတတ်နေတာရော ၇ွာသားတွေပစ္စည်းတွေသည်သွားတာရော ရိုက်ထားတယ်။ သမီးတစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဘယ်သူမှ ရုံးကိုဒီဓာတ်ပုံတွေပြန်ပေးပေးမှာမဟုတ်ဘူး လို့ပြောပါတယ်။
အမှန်တကယ်ဆိုရင်ကျမသည် သတင်းလာယူသူ ကျမ အလုပ်ကို ကျမ လုပ်သူ သာဖြစ်ပါတယ်။
ကျမနန့်လင်းပါကိုရောက်သွားလို့ ဒုက္ခသည် တွေထမင်းစားရမည်မဟုတ်ပါ။သို့ပေမယ့်ကျမ အနေနဲ့ကတော့ ဒုက္ခသည်တွေ ဆယ်ရက်ကျော် အစားရေစာပြတ်လတ်နေသည် ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်ပြီးဒုက္ခသည် ထောင်ကျော် ဟာ တောထဲမှာပြေးလွားနေသည်မှာ ပျောက်ကုန်သည်မှာ ဘယ်တွေရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ အတွေးပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမ အမှန်တရားတွေကိုသိချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမဒီနေရာကို ဘာမှမတွေးပဲရောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကျမ ခရီးများစွာထွက်ဖူးပေမယ့် တိုင်းရင်းသားစစ်တပ်တွေကိုသွားဖူးပေမယ့် တိုင်းရင်းသား ရှေ့တန်းကိုသွားဖူးပေမယ့် အဆိုပါ မလုံမခြုံမှု မျိုး မခံစားခဲ့ဖူးပါ။
စစ်ဖိနပ်သံများကြားနေရသောအစိုးရတပ်များ ၀န်းရံထားသည့် နေရာတွင် ကျမ မလုံမခြုံ ခံစားနေရပါတယ်။
အဲဒီခံစားမှုသည်ဘာကြောင့် ပေါ်လာမှန်း ကျမ မသိပါ။
ထိုညကို ဖြတ်သန်းရတာကတော့ ကျမတို့အတွက်သံသယများစွာ နဲ့ အိမ်မက်ဆိုးပင်ဖြစ်တယ်။
မနက်မိုးလင်းလာတော့ကျမလည်း ဘုရားကျောင်းရှေ့မှာထိုင်နေမိပါတယ်။ ကျမတို့ လမ်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ တပ်ရင်းတစ်ခုစွဲထားပြီးဖြစ်ပြီးလှမ်းလည်းမြင်နေရပါတယ်။
ဖာသာက စကားသွားပြောဦးမယ်။လို့ဆိုတာ ထွက်သွားပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာကျမတို့နဲ့ပါလာတဲ့ဒုက္ခသည် အမျိုးသားတွေကညက ကျန်တဲ့ခေါက်ဆွဲတွေ ကိုပြုတ်လာပါတယ်။
မနေ့ညမှောင်ထဲမဲထဲမှာကျမပြုတ်တဲ့ခေါက်ဆွဲထက် အရသာများစွာရှိပါတယ်။ ကျမ မနေ့ညက သူတို့စားဖို့ပြုတ်ပေးတဲ့ခေါက်ဆွဲက ပျော့ဖတ်ကာ ရေကပျစ်ခဲနေပါတယ်။ကျမက သူတို့ကို အကိုတို့ပြုတ်တဲ့ခေါက်ဆွဲက ကျမပြုတ်တာထက်တောင် ပိုကောင်းသေးတယ်ပြောတော့သဘောကျကာ သူတို့ရယ်နေကြပါတယ်။
ကျမတို့ရှေ့ဆက်သွားဖို့မသွားဖို့မဆုံးဖြတ်ရသေးခင်မှာပဲဒုက္ခသည်စခန်းမှ အကိုကြီးတွေက ကျမတို့နေခဲ့သည့် ဘုရားကျောင်းဘေးက အိမ်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြပါတယ်။စောင်တွေသေချာပြန်ခေါက် တအိမ်လုံးတမြက်စည်း လှည်းကြပါတယ်။ နောက်ဘုရားကျောင်းထဲကပန်းတွေကိုသန့်ရှင်းကြ ပါတယ်။ တံခါးတွေကို သေချာပြန်ပိတ်ပါတယ်။
သူတို့ကိုကျမကြည့်ရင်အရမ်းအံ့သြမိပါတယ်။ သူတို့တည တာ တည်းခို ခဲ့သောအိမ်ကို ဒုက္ခသည်များစွန့်ပစ် သွားသည့်အိမ်ကိုဒီအတိုင်းမထားခဲ့သေချာ ပြန်ထားပေးခဲ့ဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။ထို ဒုက္ခသည် အကိုကြီး တွေကိုကြည့် ကာသူတို့စိတ်ဓာတ်ကို လေးစား မိပါတယ်။
ခဏနေတော့ဖာသာခါးလီကဘယ်လိုမှ ဆက်သွားလို့မဖြစ်တော့ဘူး ဟိုဘက်မှာ ဒီနေ့တောင်ကုန်းကို အပြီး သိမ်းတော့မယ်တဲ့လို့ပြောပါတယ်။
ဖာသာနဲ့ကိုအောင်စိုးလင်းက ဒုက္ခသည်တွေ ဆီဆန်မရောက် တော့ဘူးဟုဆိုတာ မျက်နှာမကောင်းကြ ပါ။
ကျမတို့လည်းစိတ်ပျက်စွာနဲ့ကားပေါ်တတ်ကြရပါတယ်။အပြန်ကြတော့ကျမတို့ လမ်းတောက်လျောက် ရွာသားတွေရဲ့ အိမ်တွေထဲမှာ စစ်သားတွေနေထိုင်နေသေးတာ မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကျော်စိုးလင်းကသူတို့ တသက်လုံးနေနိုင်မှာကျလို့ ဒီရွာတွေ ထဲ ၀င်နေတယ်။ သူတို့မြင်တာနဲ့ရွာသား တွေကလန့်ပြီး အကုန်ပြေးတာထုံးစံပဲ အ၇င်တုန်းက လုပ်ခဲ့တာတွေကြောင့် အခုလည်း အမြင်ပြန်ပြောင်းဖို့ဆိုတာ တော်တော်ခက်တယ်။လူတွေသနားပါတယ် ဗျာ။ သူတို့လုပ်လို့ တောထဲမှာပျောက်တဲ့သူတွေ ပျောက်နေတယ်။လို့ပြောရင်းသက် ပြင်းချပါတယ်။
အောက်တိုဘာ၂၃ ရက်နေ့ကစလို့ မန်စီမြို့နယ်ထဲကရွာတွေ ကရွာသားတွေ အစိုးရတပ်တွေကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာဟာဗန်းမော်မြို့က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ နဲ့ မိုင်းခေါင်ကျေးရွာရဲ့ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ စုစုပေါင်းဒုက္ခသည်တစ်ထောင် ကျော် ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ ရောက်သွားတော့ အောက်တိုဘာ ၂၉ နဲ့၃၀ ရက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားကျောင်းတွေကအလံတွေတပ်ဆင်ထားတဲ့ကားတွေ ဟာဒုက္ခသည်တွေကို လမ်းတွေမှာလိုက်လံရှာ ဖွေပြီး ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကိုပို့ပေးနေခဲ့ပါတယ်။ သင်းအုပ်ဆရာများ၊ကလည်းရွာတွေကိုသွားနိုင်သမျှသွားပြီးအစိုးရစစ်တပ်က ဗိုလ်တွေနဲ့ စကားပြောဆို ဖမ်းဆီးထားသောသူများကို လွတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ကြပါတယ်။
ဒုက္ခသည်များ ငိုကြွေးကာထွက်ပြေးနေသည့်ပုံများကို ကျမတို့ ခွဲထွက်ပြီး သွားခဲ့တဲ့ကိုကောင်း ထက်ကရခဲ့ပါတယ်။
ဒုက္ခသည်များမိုးရွာထဲပြေးလွှားကာ ငိုကြေးနေပုံတွေကို ကိုကောင်းထက်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရသည်မှာ အလွန်ရင်နင့်ဖွယ်မြင်ရပါတယ်။
ကျမတို့မိုင်းခေါင်းကျေးရွာကိုရောက်တော့ပထမတွေ့ခဲ့သည့် ဗျူဟာမှူး နဲ့ ပြန်တွေ့ပါတယ်။။ ကျမက အလုပ်အားလုံးကို ပြီးစီးနေပြီဖြစ်လို့ဘုရားကျောင်းထဲ က ခုံမှာထိုင်ပြီး အမောဖြေနေပါတယ်။
သူက အေးအေးပင်သူနဲ့အင်တာဗျူးကိုမသုံးစေချင်ကြောင်း ။ ရွာသားတွေအေးဆေး စွာနေနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ဓာတ်ပုံအချို့ကိုမသုံးဖို့တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျမက အသံဖိုင်ကိုတော့အင်တာဗျူးလုပ်သူကမသုံးနဲ့ဆို၇င် သုံးခွင့်မရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်ကျမ မှာရှိကြောင်း။
ဖြစ်နိုင်ရင်ကျမဟာအစိုးရစစ်တပ်ဘက်က အသံကိုလည်းရလိုတာကြောင့် သုံးခွင့်ပြုဖို့ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။
သူက နားလည်မှုတွေလွဲနေတာရှိကြောင်း သူလည်း ရန်ကုန်ကိုပြန်ချင်ကြောင်း တခြားစကားတွေပြောပြီး နူတ်ဆက်ပြီးပြန် သွားပါတယ်။
ဗျူဟာမှူးပြန်သွားတော့သုံးပွင့်နဲ့ဗိုလ်နှစ်ယောက်လာပြီး ကျမကို ဒုက္ခသည်တွေကို ဘာမေးခွန်းတွေ မေးခဲ့ပါသလဲ။
အသံဖိုင်တွေဘယ်မှာလဲ။ ကင်မရာထဲက ဓာတ်ပုံတွေ ကိုဘယ်လို ပို့လဲမေးပါတယ်။
ကျမ ညီမကဓာတ်ပုံ တွေ အကုန်လုံးကိုပို့လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ခပ်တည်တည်ပြောပါတယ်။
ကျမကတော့ကျမ ဒုက္ခသည်တွေကို ဘာတွေမေးတယ်ဆိုတာ တစ်ခွန်းချင်း ပြန်ပြောဖို့ ကျမတို့ ဗိုလ်ကြီးတို့အနေနဲ့စစ်မေးဖို့ အခွင့်မရှိကြောင်း၊ ကျမဟာကျမ အလုပ်ကိုလုပ်နေ တာဖြစ်တယ် လို့ပြောလိုက်တော့မျက်နှာပျက်ပြီး ထွက်သွားကြပါတယ်။
တကယ်တော့ကျမတို့မှာအသံဖိုင်တွေဓာတ်ပုံတွေပို့ဖို့ မပြောနဲ့ ဖုန်းတွေ တောင် ဆက်သွယ်လို့မရပါ။
ကျမ ညီမလည်းသူက မန်မိုရီစတစ်ကို ယူမှာဆိုးလို့ ဖွက်ထားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့သူက ကျမတို့ကို အဲလိုစစ်မေးနေပြီးပိတ်ထားမှာစိုးရိမ်တာကြောင့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ရွာထိပ်မှာရှိတဲ့ဖုန်း ဆီသွားကာ အော်ပေးပြီး သူ့ရုံးကိုအမြန်ပို့လိုက်ပါမယ်။
နောက်ဆုံးကျမတို့ကားထွက်ခွင့်ရကာ မန်စီ မြို့နယ်ထဲကနေ ထွက်ခဲ့ရတော့မှာ သက်ပြင်းချလို့၇ပါတယ်။
ကျမ ဒီခရီးစဉ်အကြောင်းကိုရေးဖို့ဆုံးဖြတ်ရတာဟာ ကျမသတင်းထဲမှာ အချို့အကြောင်းအရာတွေကို ထည့်ရေးဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမတို့ကိုသေနတ်နဲ့ချိန်ခဲ့တာ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ပိတ် မိနေတာ၊ ကျမကို စစ်မေးခဲ့တာကလွဲပြီး ဘေးမသီရန်မခ အိမ်ပြန် လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျမ အဲဒီစစ်မြေမြင်ကိုယ်တိုင်သွားခဲ့ပေမယ့်ဒီကနေ့ အထိ အစိုးရ စစ်တပ်ကိုမေးချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေရှိပါတယ်။ဗျူဟာမှူးကသူ့ ဖြေတာကို မရေးဖို့ပြောတဲ့ အတွက် ကျမ ကိုယ်တိုင် ဒုက္ခသည်တွေ အသံတွေကိုပဲသုံးခဲ့ရပါတယ်။အခုရေးတဲ့ ဆောင်းပါးကလည်း ကျမ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ခရီးစဉ်မှတ်တမ်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမ ဟာ ကျင့်ဝတ်ကိုကောင်းစွာ လိုက်နာဖို့သင်ကြား ခြင်းခံရတဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမမှာ မျှတဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ ကျမကို မျှတခွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ဗျူဟာမှူးကိုယ်တိုင်ရွာတွေ ထဲမှာ စစ်သားတွေ မနေပါဘူးလို့ပြောပေမယ့် ကျမ ကိုယ်တိုင်မျက်လုံးနဲ့ စစ်သားတွေနေထိုင်နေတာမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စကို ဘယ်များပြောချင်ပါသလဲ။
ရက်သပတ် တစ်ပတ်အတွင်းမှာ ရွာ ဆယ်ရွာကျော်က ပြေးတဲ့ရွာသားတွေ ထောင်ငါးရာ ဟာ ဒုက္ခသည်တွေ ဖြစ်သွားကြပြီ။ အဲဒီကိစ္စတွေကို ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။
မုန်းဒိန်ပါရွာကို ဝင်ဝင်ချင်းဘာကြောင့်လက်နက်ကြီးကို အလည်မှာချပြီး ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါလဲ။
ကောက်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာပြေးခဲ့ရတဲ့ရွာသားတွေဟာ အိမ်မှာပြန်နေရရင်တောင် တစ်နှစ်လုံးအတွက် စားစရာမရှိတာ့ပါဘူး။ ဒီတစ်နှစ်ကို သူတို့ ဘယ်လိုဖြတ်သန်းကြမလဲ။
တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ဆွေးနွေးနေချိန်မှာဘာကြောင့် လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်သံတွေ ကို မုန်းဒိန်ပါရွာကနေကြား နေရပါလဲ။
မုန်းဒိန်ပါရွာကအမျိုးသမီးတွေ ဆီက ယူသွားတယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကပြော ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လက်ဝက်လက်စားတွေဘယ်သူ လက်ထဲမှာလဲ။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
(စာရေးသူ နန်းလွင်သည် ကုမုဒြာဂျာနယ်မှ အကြီးတန်းသတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သတင်းဆောင်းပါးများကိုအင်ဂွန်ဂျာဝါဘလောခ့်တွင် အမြဲဖော်ပြခွင့်ပေးသော နန်းလွင်အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။)
Posted by Lazaru at 1:32 PM
Labels: နန်းလွင်, ပင်တိုင်